janvier 2018 - Page 4 sur 75 -
Ambondromamy : Andian-jiolahy fito tra-tehaka
Nihorohoro fatratra amin’ireto karazana andian-jiolahy hikoizana ireto ny mponina tany Ambondromamy noho ny lazany amin’ny resaka vaky trano miaro fampihorohoroana sy fanolanana. Miahiahy andro aman’alina araka izany mandrapahitan’ny mpitandro filaminana vokany tamin’ny fitadiavana ireo andian-jiolahy …Tohiny
VIH/Sida : Voa ny 90 isan-jaton’ny zaza
Ny 90 isan-jaton’ny zaza aty Afrika no voan’ny tsimokaretina VIH/Sida. Ny 50 isan-jaton’ny zaza vao teraka dia maty alohan’ny faha-3 taonany, vokatry ny fitondran’ny reny ny tsimokaretina Sida. Noho izany, Ilaina ny fikarohana vahaolana haingana …Tohiny
Mpitarika miisa 28 no handrafitra ny birao iraisam-paritry ny Hvm Faritra Atsinanana na ny « Bureau Inter-Régional », ka ny ao Toamasina I dia misy mpikambana misy 5 ;Toamasina II misy 5; Brickaville misy 5; …Tohiny
Nahazoana tombony ary nahomby ny vokatry ny fivoriambe andiany faha-30, izay natrehan’ ireo filoham-pirenena aty Afrika hoy ny filoha malagasy, Hery Rajaonarimampianina, nandritra izay roa andro tatsy Addis-Abeba izay. Izay no navaliny manoloana ireo fanontaniana …Tohiny
Ankoatra ireo fanangonan-karena any ivelany sy ny raharaha izay efa nampalaza an’i Mamy Ravatomanga izay mpandraharaha kalaza nandritra ny fotoanan’ny Tetezamita, dia mbola misy ihany koa ny raharaha izay miandry azy eto Madagasikara , dia ...Tohiny